फेसबुकमा देखियो यस्तो समस्या, प्रयोगकर्ता हैरान - Everest Dainik - News from Nepal
फेसबुकमा देखियो यस्तो समस्या, प्रयोगकर्ता हैरान
काठमाडौं, फागुन ३०। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउन समस्या भैराखेको छ? कतै सरकारले ‘ब्लक’ गर्नलागेको त होइन? धेरैको आशंका यस्तो होला तर यस मामिलामा सरकारको कुनै हात छैन ।
विश्वभरि नै फेसबुकका प्रयोगकर्ताहरूले अहिलेसम्मकै गम्भीर समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
विश्वभर फेसबुक प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट खुलेका छैनन् र खुलेकाले पनि राम्रोसँग काम गरेका छैनन् ।
फेसबुकसँगै इन्स्टाग्राम तथा ह्वाट्सएप पनि डाउन भएका छन् । बुधबार रातिदेखि समस्या देखिएको हो । केही क्षेत्रको समस्या समाधान भएको छ । तर अझै पनि नेपालसहित विश्वभर फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल डाउन भएका छन् ।
फेसबुकले समस्या समाधानका लागि तत्कालका लागि आफ्नो प्लेटफर्म डाउन भएको र केही समयमै समस्या समाधान हुने बताएको छ । फेसबुकको एप्लिकेशन प्रयोगमा समस्या भएको देखिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस फेसबुकबाट चिनेका व्यक्तिलाई विश्वास गर्दा १४ युवतीकाे १ करोड ५० लाख डुब्याे
सुरुमा केही फेसबुक प्रयोगकर्ताले समस्या बारे बताएका थिए । त्यसपछि समस्या बिस्तारै अधिकांश प्रयोगकर्तामा फैलिएको हो ।
यस्तो समस्या यसअघि सन् २००८ मा देखिएको थियो र त्यो बेला फेसबुकका प्रयोगकर्ता विश्वमा १५० मिलियन थिए । अहिले विश्वभर फेसबुकका मासिक प्रयोगकर्ता २.३ बिलियन रहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस फेसबुकबाट प्रेम नगर्नुस्, नत्र.....
समस्याको कारण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । यो समस्या नेपाली समय अनुसार बुधबार राति पौने १० बजेदेखि सुरु भएको हो ।
फेसबुक र इन्स्टाग्राम डाउन भएपछि धेरै ट्वीटर तर्फ मोडिएका छन् र उनीहरुले मजाक गरिरहेका छन् । अहिले ट्वीटरमा ह्यासट्याग फेसबुक डाउन र ह्यासट्याग इन्स्टाग्राम डाउन प्रयोग गरि पोस्ट भइरहेका छन् ।
ट्याग्स: Facebook, Facebook down